Dadka isticmaala Internet-ka oo ka batay kala bar dadka adduunka ku nool - Halbeeg News
GINEVA (HALBEEG)- Qiyaas cusub oo ay sameysay Hay’adda caalamiga ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Isgaarsiinta ayaa muujinaya in horumar lixaad leh ay dunida ka gaartay dhanka isticmaalka Internet-ka waxaa la sheegay in dad ka badan kala bar dadka dunida ku nool ay maanta ku xiriiraan internet.
Sida lagu sheegay tirakoobkii u danbeeyay ee ay soo saartay Hay’adda Midowga Isgaarsiinta Aduunka 51.2% ayaa isticmaala internet-ka waana dad tira ahaan u dhigna 3.9 Bilyan oo qof.
Wadamada horumaray lanbarka internet-ka isticmaala ayaa si tartiib tartiib ah u kordhayay laga soo bilaabo 2005-tii oo uu ahaa 51.3% illaa maanta oo uu yahay 80.99%.
“Midowga Isgaarsiinta Aduunka waxa uu qiyaasayaa in sanadka 2018 dunidu ay horumar weyn ka gaarto dhismaha bulsha aad ugu xiriirta Internet-ka” ayuu yiri xoghayaha guud ee Midowga Isgaarsiinta Aduunka Houlin Zhao isaga oo intaasi ku daray “Waxa aan dhaafnay hadafkeennii ahaa in aan kala bar ka gaarno dadka aduunka ee isticmaala internet-ka. Tani waxa ay ka dhigan tahay tallaabo muhiim ah oo horay loo qaaday si loo gaaro bulsho aad isugu xiran, si kastaba dad badan oo dunidan ku nool ayaa weli naawilaya in ay ka faaiideystaan dhaqaalaha teknoolojiyadda”.
Guud ahaan gobolada ay ka kooban tahay Midowga Isgaarsiinta Aduunka horumarka ugu ballaaran waxaa ku tallaabsatay Afrika, taas oo tirada internet-ka isticmaashaa ay 2005-tii aheyd kaliya 2.1% iyadoo 2018-kana gaartay 24.4%.
Gobolka ugu yar ee dhinaca kororka tirada dadka isticmaala internet-ka ayaa noqday Europe 79.6% iyo America oo aheyd 69.6%.
Guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Puntland oo soo bandhigay habraaca doorashada